Edemede Ed Breault na Martech Zone |
Edemede site na Ed Breault
Dị ka onye isi ahịa ahịa, Ed Breault na-ahụ maka ya nke Aprimo ika na uto. Ọ na-ebugharị atụmatụ B2B SaaS ịga-ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ yana njikwa akụrụngwa dijitalụ yana ụdị njikwa akụrụngwa ahịa. Ọ na-ejikọta nka nka n'ịzụ ahịa na nnukwu nzụlite na mmepe ika yana mmasị maka ịmepụta mmemme ahịa nke dabeere na akaụntụ nke na-ewulite mmata, ọdịiche, ọchịchọ, na n'ikpeazụ ego.
Fraịdee, June 10, 2022 Fraịdee, June 10, 2022 Ed Breault
Mgbe a bịara n'ịkwakọba na ịhazi ọdịnaya, e nwere ọtụtụ ihe ngwọta dị n'ebe ahụ-chee echiche njikwa ọdịnaya (CMS) ma ọ bụ ọrụ nnabata faịlụ (dị ka Dropbox). Digital Asset Management (DAM) na-arụ ọrụ na ụdị ngwọta ndị a-mana ọ na-ewe ụzọ dị iche na ọdịnaya. Nhọrọ dị ka Igbe, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, wdg .., na-eme ihe dị ka ebe a na-adọba ụgbọala dị mfe maka ihe ikpeazụ, njedebe ala; ha anaghị akwado usoro niile dị elu na-abanye n'imepụta, nyochaa na ijikwa akụ ndị ahụ. N'ihe gbasara DAM
Strategy Ọdịnaya Modular maka CMO iji belata mmetọ dijitalụ
Tọzdee, Machị 17, 2022 Fraịde, Machị 18, 2022 Ed Breault
Ọ ga-awụ gị akpata oyi, ikekwe na-akpasu gị iwe, ịmara na 60-70% nke ndị na-ere ọdịnaya na-emepụta na-ejighi ya. Ọbụghị naanị na nke a na-emebi emebi, ọ pụtara na ndị otu gị anaghị ebipụta ma ọ bụ kesaa ọdịnaya n'ụzọ dabara adaba, hapụ naanị ịhazi ọdịnaya ahụ maka ahụmịhe ndị ahịa. Echiche nke ọdịnaya modular abụghị ihe ọhụrụ - ọ ka dị ka ihe atụ echiche kama ịbụ nke bara uru maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Otu ihe kpatara ya bụ uche -